Tsvaga izvo zvekushongedza zvikanganiso zvatinowanzoita | Bezzia
Susana Garcia | 31/05/2021 20:00 | Decoration, Kushongedza maitiro
Nyika yekushongedza yakasiyanasiyana uye zvinogara zvichitaurwa kuti tinogona kushongedza zvakasununguka, kunyangwe chiri chokwadi kuti zviripo zvakare zvakajairika zvikanganiso zvatinoita anenge tisingadi. Kudzidza kushongedza hakufaniri kungoita chete nemaitiro kana nezvinodiwa zveumwe neumwe, sezvo paine humwe hunyengeri hungatibatsire kugadzira akasiyana uye akakosha nzvimbo.
Tsvaga zvimwe zve zvikanganiso zvakajairika zvekushongedza zvatinowanzoita kakawanda pamusoro petsika. Kana tichishongedza isu tinofanirwa kuve neakavhurika pfungwa kune matsva mazano uye zvakare kudzidza nzira nyowani dzekushongedza. Tsvaga zvese zvawanga usingazive iwe zvawanga uchiita pakushongedza.
1 Kurongeka kwakaipa
2 Kusaziva kuwedzera nzvimbo
3 Zvese zvakaiswa pamwechete
4 Namatira kune imwe sitaira
5 Namatira zvese kumadziro
6 Mwenje kubva kumusoro
Chimwe chezvinhu zvekutanga kutarisa kugoverwa kwezvinhu mukati meimba. Ichi ndechimwe chezvinhu zvakakosha, sezvo a Kugoverwa kwakanaka kunobatsira kuti imba ishande nekuti zvese zvinomira zvakakwana. Tinofanira kufunga nezvenzvimbo dzatinadzo nemidziyo yatinoda kuzadza nayo. Zano rakanaka nderokuita chirongwa pamwe nekusiyaniswa kwakasiyana kwatinoda kugadzira uye kuyedza navo. Tinogona zvakare kutora mifananidzo uye kukumbira shamwari dzedu kuti dzione manzwiro avanayo nemarongero eimba, nekuti ivo vanozoona zvinhu neimwe nzira. Zvakare femerwa nemagazini mazano, nekuti iwo anoita akanaka uye ane fashoni marongero.
Kusaziva kuwedzera nzvimbo
ari Spaces dzakakura dzinogara dzichinakidza. Rimwe rematambudziko makuru edzimba nekufamba kwenguva anga ari iwo nzvimbo dzaive dzakazara nezvinhu uye dzaitaridzika sediki. Mavara echiedza ndiwo akakosha kubata, nekuti anowedzera nzvimbo, asi iwe unofanirwa zvakare kushandisa magirazi kuwedzera mwenje. Aya magirazi ari padyo nemahwindo kana kumberi kwawo anoita kuti mwenje uwande.
Zvese zvakaiswa pamwechete
Kumwe kukanganisa zvakajairika kusanganisa zvese zviri munzvimbo. Dzimwe nguva isu tinofunga kuti zviri nyore kwazvo kuisa zvese pamwe chete, asi chokwadi ndechekuti izvo zvinoita kuti nzvimbo dzive dzinofinha uye dzisina hunhu. Izvo zvinongopa pfungwa yekuti isu hatizive kushongedza kana kuti hatina kunetseka nazvo. Saka zvakanakisa kusarudza matatu kana maviri mumvuri uye kunamatira pavari, ichiita imwe chete yavo huru. Uye zvakare, izvozvi zvakajairika kusanganisa mapatani.
Namatira kune imwe sitaira
Izvo zvinokwanisika kunamatira kune imwechete chete dhizaini nekusarudza makiyi ayo nekuwedzera iwo ese. Asi zviri nani kusarudza akati wandei uye woasanganisa nenzira isinganetsi, kunyangwe kana imwe yacho iri yekutanga. Saka tsvaga kurudziro nekuti mazhinji emastaira aya anogona kusanganiswa, sevintage uye maindasitiri, rustic uye yemazuva ano Uye zvichingodaro kusvika mukusingaperi.
Namatira zvese kumadziro
Zvakajairika kuti vanhu vaise fanicha kumadziro kuti vachengetedze nzvimbo, asi kana makamuri akapamhama zvinogona kunge zvakakodzera kusiya zvimwe zvinhu zvakasiyana. A) Hongu isu tichagadzira yakanyanya kusununguka mamiriro. Hatifanirwe kuve nemidziyo nguva dzose iri muhurongwa hwakafanana, nekuti tinogona kuichinja kuti tigadzire nzvimbo nyowani nguva nenguva. Iwe unofanirwa kutyora kuumbwa kuti unakirwe nekushongedza.
Mwenje kubva kumusoro
Imwe mhosho inoitwa ndeye kushandisa mwenje chete kubva kumusoro. Kutamba nemarambi kunotibatsira kugadzira nzvimbo dzinodziya uye mune dzimwe nzvimbo nemidziyo zvinobuda pachena. Shandisa mwenje wemadziro nemasconces uye marambi epasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zvikanganiso zvekushongedza zvatinowanzoita